एमाले–मााओवादी नमिल्दै किन नेपाल आउँदैछिन् स्वराज ? यस्तो छ नालीबेली !::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
एमाले–मााओवादी नमिल्दै किन नेपाल आउँदैछिन् स्वराज ? यस्तो छ नालीबेली !
काठमाडौँ- भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराज नेतृत्वको उच्चस्तरीय कूटनीतिक टोली दुईदिने भ्रमणका लागि बिहीबार काठमाडौं उत्रने भएको छ । नेपालमा नयाँ सरकार गठनको पूर्वसन्ध्यामा स्वराज भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको राजनीतिक सन्देश लिएर आउन लागेको स्पष्ट हुन्छ ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयले स्वराजको भ्रमण दुई देशबीच उच्च राजनीतिक भेटघाटको निरन्तरता भएको बताएको छ । नेपाली पक्षले भने भ्रमणबारे अझैसम्म औपचारिक सूचना पाएको छैन, उनी काठमाडौं आउन लागेको जानकारीमात्र पाएको जनाएको छ । स्वराज बिहीबार काठमाडौं आइपुग्नेबारे सोमबार अबेर जानकारी पाए पनि उनी कति बजे काठमाडौं उत्रने, त्यसपछिको कार्यतालिका के–के छ भन्नेबारे मंगलबार साँझसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयको शिष्टाचार महाशाखा अनभिज्ञ छ ।
विशेष विमानमा काठमाडौं आउने स्वराजको टोलीमा भारतीय विदेशसचिव विजयकेशव गोखले, प्रवक्ता रभिस कुमार, नेपाल हेर्ने डेस्क प्रमुख सुधाकर दलेलालगायत वरिष्ठ अधिकारीहरू हुनेछन् । उनले आएकै दिन राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेट्ने तयारी छ । भोलिपल्ट अर्थात् फर्कनुअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्ने बताइएको छ । सबै भेटवार्ता दुईपक्षीय सहकार्य र सम्बन्ध विस्तारमा केन्द्रित हुने विदेश मन्त्रालयको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
भ्रमणबारे निर्वाचनपछि ‘कामचलाउ’ बनेको शेरबहादुर देउवा सरकार आफंै स्पष्ट छैन । प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार दिनेश भट्टराईले भ्रमणबारे टिप्पणी गर्न चाँडो हुने जनाउँदै यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताए । परराष्ट्र सहप्रवक्ता रामबाबु ढकालले विदेशमन्त्री आउने जानकारी भएको र दुईपक्षीय वार्तालगायतको तयारी भइरहेको जनाए । ‘आज ९मंगलबार० बिदा छ । बुधबार अपराहन हामी केही दिन सक्छौं । छलफलका विषय र एजेन्डाबारे बुधबार नै जानकारी हुनेछ,’ उनले भने ।
यो भ्रमण नेपाल सरकारको निमन्त्रणामा हुन लागेको होइन । परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘दलको निमन्त्रणा वा भारत सरकारको सन्देश बोकेर आउन लागेको विशेषदूत हैसियतको भ्रमण हो यो ।’
विदेशमन्त्री स्वराजको भ्रमणको मुख्य चासो एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग जोडिएको छ । एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको फोन वार्तामा नै विदेशमन्त्री आउने जानकारी दिएको बताए । अध्यक्ष ओलीसँग दुईपटक फोन वार्ता गरेका मोदीले पछिल्लो परिस्थितिबारे छलफल गर्न स्वराजलाई नेपाल पठाउने जानकारी दिएको हुन सक्ने जनाउँदै पोखरेलले भने, ‘भारतले निर्वाचनपछिको अवस्थालाई नजिकबाट नियाल्न यो भ्रमण हुन लागेको हो । छिमेकसँग सम्बन्ध सुमधुर राखेरै अघि बढ्ने हाम्रो नीति हो । कसैको दबाबभन्दा पनि मुलुकको सर्वोपरि हितमा नै काम गर्ने हो ।’
भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा हेरिएका ओलीप्रति सशंकित भारत र भारतप्रति सशंकित ओलीबीचको ‘ट्युनिङ’ स्पष्ट पार्न स्वराज नेपाल आउन लागेको जानकारहरूको भनाइ छ । तिनका अनुसार अहिलेको परिस्थितिमा न ओलीले भारतीय चासोलाई बेवास्ता गर्न सक्छन् न त भारतले ओलीलाई । त्यही कारण सम्बन्धमा यसअघि देखापरेको तिक्तता घटाउन र सहकार्यका आधारहरू पहिल्याउन यो भ्रमण हुन लागेको देखिन्छ ।
स्वराजको अपर्झट भ्रमणमा ओलीको सत्तारोहणपछि नेपाल चीनतर्फ धेरै नढल्कियोस् भन्ने भारतीय चाहना पनि जोडिएको छ । बेइजिङले नेपालमा बढाउँदै लगेको उपस्थिति र ओलीले आफ्नो पहिलो प्रधानमन्त्रित्वकालमा खोजेको चिनियाँ विकल्पलाई लिएर दिल्लीमा निकै बहस हुने गरेको छ । खासमा भारतीय सञ्चार माध्यमले भारतकै गलत नीतिका कारण चिनियाँ पक्ष नेपालमा बलियो हुँदै गएको समाचार प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । २०७२ सालमा संविधान जारी गरिएपछि नेपालमाथि भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि ओलीले चीनसँग पारवहनसहित १० बुँदे सम्झौता गरेका थिए ।
तीन चरणको निर्वाचनमा वाम गठबन्धन बलियो बनेर आएको र उनीहरूको नेतृत्वको सरकार लामो समय चल्न सक्ने हुनाले पनि ओलीसँग दिल्लीले तिक्तता घटाउन खोजेको देखिन्छ । ओली पनि भारतसँग राम्रो सम्बन्ध राखेरै सरकार सञ्चालनको बाटो सहज बनाउने तयारीमा लागेका छन् ।
चीनले आफूले सहयोग गरेका नेपालका अधिकांश यातायात परियोजनालाई भारतीय बृहत् बजारसम्म पहुँच स्थापित गर्ने दृष्टिकोणबाट हेरिरहेको विश्लेषण भारतीय सञ्चार माध्यममा पढ्न पाइन्छ । बेइजिङले औपचारिक रूपमै चीन र भारतबीच हिमालयपार सहकार्य क्षेत्रको विकास गर्ने अवधारणासाथै चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ ९बीआरआई० मा नेपालको उपस्थिति अर्थपूर्ण रहेको अवस्थामा भारत नेपालमा आफ्नो सम्बन्ध सुमधुर पारेर अघि बढ्न चाहेको हो ।
भारतको राष्ट्रिय दिवस २६ जनवरीमा दक्षिणपूर्वी एसियाका १० मुलुकका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखलाई निम्त्याएर सम्बन्ध सुधारको संकेत दिइसकेको भारतले आगामी १५ अगस्तमा सार्क सदस्य मुलुकका नेताहरूलाई निमन्त्रणा गर्ने तयारी गरेको छ । मोदीले सन् २०१९ मा हुने आमनिर्वाचनलाई समेत ध्यान दिएर छिमेक नीतिमा बढी ध्यान दिएका हुन् ।
बेलायत र अमेरिकाका लागि राजदूत रहिसकेका सुरेश चालिसेले स्वराजको भ्रमण सकारात्मक रहेको तर समय कुन तवरले चयन भयो भन्ने विषय सोचनीय रहेको बताए । ‘कुनै पनि उच्चस्तरीय भ्रमण हुनु सकारात्मक हो । यसले दुई देशबीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ,’ चालिसेले भने, ‘यो भ्रमण सम्बन्धलाई सकारात्मकतातर्फ लैजाने प्रयास पनि हुन सक्छ । धुमिलताको विषयमा स्पष्ट पार्न यो भ्रमण उपयोगी होस् भन्ने चाहन्छु ।’
कूटनीतिक मामिलाका टिप्पणीकार प्रमुख निश्चलनाथ पाण्डेले दुई देशबीच विभिन्न स्तरमा अन्तरक्रिया हुनु स्वाभाविक भएको बताए । ‘उच्चस्तरमा सञ्चार सम्बन्ध सक्रिय नभएमा चिन्ता लिनुपर्छ । हँुदा अन्यथा लिनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘समय र अवस्था दुईदेशीय छलफलबाट तय हुने हो ।’
यतिबेला नेपालमा नयाँ सरकार कुन रूपमा कसरी बन्ने भन्ने स्पष्ट छैन । त्यसैले यही अवस्थामा भारततर्फबाट हुन लागेको उच्चस्तरीय भ्रमणलाई निकै अर्थपूर्ण मानिएको छ । भारतीय विदेशसचिव गोखले कार्यभार सम्हालेलगत्तै स्वराजसँग नेपाल आउन लागेका हुन् । यो भ्रमणलाई राजनीतिक सम्बन्ध सुधार, धर्मनिरपेक्षताको विषयमा भारतको विमति र ओलीलाई भारतमा स्वागत गरेको केही समयमा मोदी नेपाल आउने तयारीका रूपमा विश्लेषण गर्नेहरू पनि छन् ।
यसअघि विदेशमन्त्री भएलगत्तै २०७१ साउन ९ मा काठमाडौं उत्रेर स्वराजले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई महत्त्व दिएकी थिइन् । उनको त्यो थालनीले मोदीको नेपाल भ्रमण भयो, जुन भ्रमणलाई १७ वर्षपछि भारतीय प्रधानमन्त्रीको ऐतिहासिक भ्रमणका रूपमा लिइएको थियो । तर, त्यसले बनाएको सकारात्मक माहोल लामो समय टिक्न पाएन ।
त्यसको केही समयपछि २०७२ असोजमा संविधान जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढेपछि भारतका तत्कालीन विदेशसचिव एस जयशंकर काठमाडौं आइपुग्दासम्म नेपाल–भारत सम्बन्ध पूर्णतस् बिग्रिसकेको थियो । त्यही भ्रमणको आडमा भूकम्पका कारण जनजीवन थिलथिलो भएको अवस्थामा भारतले नाकाबन्दी नै लगाएर अमानवीयतासमेत प्रकट गर्‍यो ।
त्यो नेपाली जनताले भुलेका छैनन्, जुन गल्ती स्वीकार गरेर सच्चिने प्रक्रियामा भारत अगाडि बढ्न खोजेको हो भने स्वराजको सक्रियतालाई सकारात्मक रूपमै लिनुपर्ने हुन्छ ।